Qalabki lagu dhisi laha Dekadda Garacad oo Gaalkacyo laga dajiyaay (dhegayso) – Radio Daljir
Qalabki lagu dhisi laha Dekadda Garacad oo Gaalkacyo laga dajiyaay (dhegayso)
Maajo 13, 2018 1:14 g 1
Dhismaha Dekeda Garacad ayaa lafilayaa dhowaan in labilaabo taasi oo in mudo ah ay hadalhayeen bulshada ku dhaqan gobolka Mudug,waxaana Dekeda dhismeheeda looxilsaarey Companiga Wadaagsan.
Qormo: Shacabka Puntland iyo Jubbaland Nina kama weecan karro hadafki loo yagleelay oo ahaa Dowladnimo& Somalinimo
Dadka ka khudbaynaya munaasabadda looga hadlayo dhismaha dekadda Garacad maxaa loo qarinayaa magacyadooda? Maxaase loo qariyey qudbaddii oo loo maqliwaayey qudbaddii Garaadka ee meesha lagu xussay inuu xaadir ku yahay? Waxa ma dadkaa lagu cammaynayaa? Timir laf baa ku jirta ee waa in Radio Daljir si fiican u hubsadaa munaasibaddaan u eg mid aan jirin ee xaalad abuura ee un lacag looga aruursanayo dadka masaakiintaa ee beenta loo sheegayo. Munaasibaddaan waxaa loo ekaysiiyey in uu soo wariyey Radio Daljir. Wixii danbiya oo halkaas ka dhaca waxaa loo haystaa Radio Daljir.